ကြံ့ ဖွံ့ မနိုင်လျှင် ကွဲ ကြမည့်သူများ
ဒီတစ်ခါစစ်တပ်နှင့်ပက်သက်သောကြံ့ဖွံ့ပါတီ“ ကွဲ ”ပါ့မလား။
၁- ၁၁- ၂၀၁၀
Posted by Andaman Hero at 6:26 PM0comments
ချစ်မြတ်နိုးစိတ်နဲ့NLDကိုပုံအောပေးခဲ့တဲ့အခါ၊လက်တွေ့မှာနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်သူတွေအများကြီးရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာLandslideဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အာဏာရအောင်မယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီနေရာမှာနအဖအကျင့်ယုတ်တာကိုချည်း ယိုးမယ်ဖွဲ့မနေဘဲကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုရိုးရိုးသားသားပြန်ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်။(ပြောစရာတွေအများကြီးပါ။
Posted by Andaman Hero at 5:55 PM0comments
by ရွှေမော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်း on Tuesday, 19 October 2010 at 22:20
သာဓုထံရောက်လာကာ. . .
သွားပို့စဉ်သခင်သန်းထွန်းကိုဆိုက်ကားပေါ်တွေ့လိုက်ရသဖြင့်သာဓုကပင်လှမ်းခေါ်ပြီးလက်ဖက်ရည်သောက်ဖိတ်ရာ. . .
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲရောက်ကြလေပြီ။သာဓုအားနိဒါန်းပျိုးစရာမလို၊မကြိုက်ကြောင်းသူသိထားသည့်အတိုင်း. . .
သို့တိုင်အောင်သာဓုမှာပါတီနိုင်ငံရေးကိုလုပ်လိုစိတ်မရှိတော့သောကြောင့်သူ၏ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုသာဓုဂုဏ်ယူမိကြောင်းနှင့် အခြေအနေကမပေးသေး၍မပါဝင်လိုသေးကြောင်းငြင်းဆန်လိုက်ရာ. . .
ဟုတ်ပြီလေ၊စိတ်မဝင်စားတာဝင်စားတာကခင်ဗျားဆန္ဒ၊စိတ်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်ရမှာကကျွန်တော့်တာဝန်မဟုတ်လား၊ဒီတော့ ကျွန်တော်ဇွတ်ပြောရမှာပဲ၊ဒီမှာသခင်ဖေသန်း၊ခင်ဗျားလည်းမှတ်မိမှာပေါ့၊တရားပွဲဟောပြောပွဲတစ်ခုခုမှာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဆုံမိကြတိုင်းကျွန်တော်တို့သခင်သိန်းမောင်ကြီးတို့၊သခင်အောင်ဆန်းတို့ကဘိုးစိန်ကြီးလိုနောက်ဆုံးမှထွက်မယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကို ရှေ့တန်းတင်ပေးလိုက်ရော၊ခင်ဗျားကထိပ်ဆုံးကနေဒေါက်ဒေါက်ဒက်ဒက်နဲ့ပြောချသွားရော၊ကျွန်တော်တို့အလှည့်ရောက်တော့ ပြောစရာအချက်အလက်မကျန်သလောက်ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးတာတွေလေ'
အင်း၊ကျွန်တော်တို့မှာ-အဲအဲ-သခင်ဖေသန်း-ပြောသွားသလိုပါပဲ'နဲ့ပြီးသွားရတယ်၊အဲသလိုခင်ဗျားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောတတ်တာရယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဘဝမှာတောင်ခင်ဗျားမှန်တယ်ထင်ရာကိုရဲရဲကြီးပြောချလိုက်တာရယ်၊ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုး၊ အရည်အချင်းမျိုးရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုတယ်'
သူကဆက်လက်၍ဇွတ်ပြောသေးသည်။သာဓုကလည်းဇွတ်ပင်ငြင်းဆန်ရာမှနောက်ဆုံး'စဉ်းစားပါ့မယ်ဗျာ'ဟုပြောလိုက်မှပင် မကျေမနပ်လေသံဖြင့်. . .
'အေးလေဗျာ၊ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုမကြိုက်လို့ဆိုလည်းတစ်ခုခုတော့လုပ်ဗျာ၊ခုသခင်မြတို့လည်းဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ထောင်ကြလိမ့်မယ်၊ဝင်လုပ်ချင်လုပ်ပါ၊ဒီအတိုင်းတော့ဘေးဖယ်မနေစေ့ချင်ဘူး၊သခင်ဖေသန်းလိုလူတစ်ယောက်နိုင်ငံရေးက ကြဉ်သွားတာတိုင်းပြည်နာတယ်၊ဖဆပလထဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လုပ်ပေါ့ဗျာ၊နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်အတွက်တစ်ခုခုတော့'
ကျွန်တော်ပါဝင်ဆောက်လို့တစ်ခုခုမှားသွားရင်ဒီဗိမာန်ကြီးတစ်စိတ်တစ်ဒေသသော်လည်းကောင်း၊တစ်ခြမ်းသော်လည်းကောင်း ပျက်စီးသွားနိုင်စရာကောမရှိဘူးလား၊ခင်ဗျားကကျွန်တော့်ကိုအရေးကြီးတဲ့အဆင့်မှာထားပြီးပြောနေတော့မှားစရာရှိလည်း အရေးကြီးကြီးမှားမယ်မဟုတ်လား'
ဤတွင်သူအဓိပ္ပာယ်ပါပါပြုံးလိုက်ပြီးမှ. . .
တိုင်းပြည်အတွက်ဘာတစ်ခုခုလုပ်ရမည်နည်း။နောက်ဆုံးအတွေးပေါက်သည်ကားဘက်မလိုက်သတင်းစာတစ်စောင်ထူထောင်ရန် ဖြစ်လျက်အဘက်ဘက်မှကျွမ်းကျင်မှုရယူလိုသေးသည့်အတိုင်းတတ်အားသမျှပုံနှိပ်စက်ကလေးတစ်လုံးဖြင့်ပဏာမပျိုးခဲ့ရာမှ တိုင်းရေးပြည်ရာသတင်းစာအယ်ဒီတာမဖြစ်ဘဲအချစ်အိမ်ထောင်ရေးစာရေးဆရာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ရ၏။
'ဒီဖဆပလတွေဆောင့်ကြွားကြွားနိုင်လွန်းလို့၊ပြီးသူတို့လုပ်ပုံတွေလည်းမကြိုက်လို့၊အဲဒါမနေ့ကတစ်နေ့လုံး၊ညကလည်းတစ်ညလုံး ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးကြတယ်၊တိုက်ရမှာကမလွယ်လှဘူးဗျ၊မြို့တော်ဝန်လောင်းဦးသိမ်းမောင်ကလည်းဧရာမပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်နေတာနဲ့ သခင်ဖေသန်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်'
အတိုချုပ်လိုက်သော်သာဓုအတန်တန်ငြင်း၏။မရ။ဇွတ်အရွေးခံခိုင်းသူများတွင်ဆန်းဦးထွန်းရင်၊ပန်းပုဦးလွင်၊ရှုမဝဦးကျော်၊ ကိုကျော်မြတို့လည်းပါ၏။ကျားကူး၊မင်းမနိုင်၊ယောက်လမ်း၊ထန်းတောကွက်သစ်သာမကကန်တိုမင်တိုက်နယ်မှဖဆဆန့်ကျင်သူ အတော်များများကလာ၍အားပေးကြသည်။တိုက်တွန်းကြသည်။ဘကြီးဘဖေကိုယ်တိုင်ကပင်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖိတ်၍ ထောက်ခံရင်း. . .
ဤအထိသာဓုစဉ်းစားဆဲပင်ရှိသေး၏။အကြောင်းသော်ကားသာဓုစိတ်ကိုသာဓုသိသည်။စမိလျှင်နောက်မဆုတ်ချင်။ မြူလူကြီးအရွေးခံရသော်နိုင်ငံရေးစိတ်ပြန်ဝင်လာမည်။ဆက်တိုက်လုပ်မိချေတော့မည်။ပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ဝင်ရန် အကြောင်းပေါ်လာမည်။သာဓုသည်နယ်ချဲ့ကိုသာတိုက်လိုသည်။ဗမာအချင်းချင်းရန်မဖြစ်ချင်။
သို့တိုင်အောင်ဘကြီးဘဖေ၏နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုဖြစ်သော . . .
အခြား-ဖဆ-တစ်ဦးတို့ရောက်လာကာ. . .
တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်အခွန်အရေးပါသည့်ဒုတိယတန်းစား-ဖဆ-ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး(အမည်မဖော်သင့်ထင်၏။) ရောက်လာပြန်ကာသာဓုအားယခုအရွေးခံမည့်နေရာမှနုတ်ထွက်ပြီးအခြားရပ်ကွက်တစ်ခုမှဝင်အရွေးခံ-ဖဆကိုယ်စားလှယ်က ဖယ်ပေးမည်၊သာဓုကလည်း-ဖဆ-အနေဖြင့်အရွေးခံရန်စသည်ဖြင့်ဆွယ်၏။သာဓုကလည်းခေါင်းခါမြဲခါသည်။
ခင်ဗျား-ပုံနှိပ်စက်ကအတော်အိုနေပြီပဲ၊အသစ်လျှောက်ပါလား၊စက္ကူတို့ပုံနှိပ်မှင်တို့ပါအင်ပို့လိုက်စင် လျှာက်လေဗျာ၊အနည်းဆုံး လေးငါးသောင်းဖိုးလောက်ပေါ့'
သူ့စကားကိုသာဓုနားလည်သည်၊သာဓုကယဉ်ကျေးစွာဖြင့်ထိုမျှငွေသာဓုတွင်မရှိကြောင်း၊မလျှောက်လိုကြောင်းလောက်သာ ငြင်းဆန်လိုက်သည်ကို. . .
ထိုတစ်ဦးကလည်းလာပြန်ချေသေးသည်။သူသည်အရွေးခံတိုက်နယ်ရပ်ကွက်တစ်ခုမှသူကြီးဖြစ်လျက်သူ့မဲများကိုသာဓုကိုပေးစေမည်။ သူကမူဟန်ဆောင်လောက်သာနေမည်။သူ့ကိုငွေ၁၅ဝဝကျပ်ပေးပါဟုဈေးခေါ်သည်။ခေါင်းခါလိုက်သောအခါ တစ်ရက်တခြား ဈေးကျသွားသည်။၁ဝဝဝကျပ်၊၇၅ဝကျပ်၊နောက်ဆုံး၅ဝဝကျပ်မလျှော့နိုင်ဟုဆိုသည်။သာဓုကမူ .
ပြဿနာကားဤတွင်မရပ်သေး။တစ်နေ့သောညနေ၆နာရီခွဲလောက်ပုဇွန်တောင်မြူလူကြီးဟောင်းဒေါ်တင်ရောက်လာပြီး ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စအရေးကြီးသောစကားပြောလို၍'ဟုလာခေါ်သဖြင့်(မောင်ဝဏ္ဏတို့အမေနှင့်လည်းဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူဖြစ်၏။) လက်ညှိုးညွှန်ရာကားမောင်းခဲ့၍ရွှေတိဂုံဘုရားအနီးသို့ရောက်မှသာဓုကမေးမိသည်။
ဒီလိုလေ-မောင်ဖေသန်းရဲ့မင်းရေးပြီးရိုက်ဝေတဲ့ကြေညာချက်ကိုအစ်ကိုကြီးဖတ်ရတော့-ဒီသာဓုဆိုတာ-ဘယ်သူလဲ-တဲ့။ ဦးဖေသန်းခေါ်စာရေးဆရာသာဓုဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးထားတော့သူမရှင်းဘူးထင်ပါရဲ့၊ဒါနဲ့မမတင်ကကျွန်မမောင်တော်တယ်လို့ ပြောတော့-အဲ-အဲ-အစ်ကိုကြီးတပည့်မောင်မြိုင်ကိုလည်းသူကစုံစမ်းခိုင်းထားတာကိုး'
ဒီလို-ဒီလို၊-မောင်ဖေသန်းရဲ့ကြေညာချက်ဖတ်ပြီးအစ်ကိုကြီးဒေါက်တာဘမော်ကအတော်သဘောကျနေတာနဲ့မောင်မြိုင်(ယခု ကျောက်ကုန်းတွင်နေသူ)ကိုစုံစမ်းခိုင်းတော့မမတင်ရှေ့တင်ပဲသူကပြောတယ်၊ကုန်ဈေးတန်းသခင်ဖေသန်းဆိုတာ သူပဲဆိုတော့' အစ်ကိုကြီးလေသိပ်ဝမ်းသာသွားတယ်၊ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲမမတင်ကိုအခေါ်ခိုင်းတာနဲ့ခုထွက်လာတာပဲ'
စကားအသွားအလာကိုခြားခြားနားနားရှင်းသွားပြီဖြစ်သော်လည်းထပ်သိလိုသေးသည်နှင့် . . .
နေဦး၊-မမတင်-ရှင်းပြဦးမယ်၊-ခု-မောင်ဖေသန်း-ပြိုင်ရမှာကသုံးယောက်နော်၊ဟိုကျားကူးကွက်သစ်သူကြီးဆိုတာက မဟာဗမာအနေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပါအစ်ကိုကြီးကပေးပြီးအရွေးခံခိုင်းထားတာကွယ့်၊ရှင်းပလား၊-အဲ-တကယ်လို့မောင်ဖေသန်းက ဒေါက်တာဗမော်နဲ့တွေ့ပြီးလို့မဟာဗမာအနေနဲ့အရွေးခံဖို့သဘောတူရင်ကျားကူးကွက်သစ်သူကြီးကိုနုတ်ထွက်လွှာတင်ခိုင်းလိုက် မယ်တဲ့၊ဒါမှမဟုတ်လည်းသူနဲ့ပတ်သတ်သမျှမဲဆန္ဒတွေ-မောင်ဖေသန်းရ-အောင်-ကျိတ်ပြီးထည့်ခိုင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်'
ဘာစဉ်းစားနေတာလဲကွယ့်၊သြော်၊တစ်ခုလည်းမှာလိုက်သေးတယ်၊သခင်ဖေသန်းကိုပြောပြပါတဲ့၊တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ပဲအရွေးခံပြီး နောက်မှကြည့်လုပ်တာပေါ့တဲ့၊လိုအပ်တဲ့အကူအညီအကုန်ရမယ်၊ခုကောမင်းပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်နေပလဲ၊အဲဒါထက်မက ရအောင် မမတင်ပြောပေးမယ်လေ'
ထိုစကားသည်စောစောကရေးခဲ့သည့်-အင်ပို့-လိုင်စင်ရမယ်-ဟူသောမြှူလုံးကဲ့သို့ဖြစ်နေရုံသာမကလူကောင်းတစ်ယောက်ကို သစ္စဖောက်သင်ပေးသည့်သဘောမျိုးအများဆုံးပါနေသောကြောင့်. . .
တော်ပါတော့-မမတင်၊ဒီကိစ္စကတော့လုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ဆရာကြီးကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါ၊တစ်နေ့သောအခါမှပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပေါ်ရင်အချိန်အခါမရွေးခေါ်ပါလို့နော်၊ခုဟာကတော့အတော်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲမမတင်၊ကျွန်တော့်ကိုစေတနာ မေတ္တာနဲ့အရွေးခံခိုင်းတဲ့လူထုကိုကျွန်တော်မလိမ်ချင်မညာချင်မညစ်ပတ်ချင်ဘူးဗျာ'
မမတင်-ငိုင်သွားသည်၊အတော်ကြာအောင်စကားမပြောနိုင်ဘဲရှိနေစဉ်သာဓုလည်းကားကိုပြန်ကွေ့ကာပုဇွန်တောင်ဘက် မောင်းထွက်ခဲ့၏။သူ့အိမ်ရှေ့ရောက်၍ကားပေါ်မှအဆင်းတွင်. . .
သို့-တုံးတိတိကြီး-ပြောလိုက်သောကြောင့်-သာဓုပင်-ယောင်ချာချာဖြစ်သွားကာအကြောင်းရင်းကိုရှင်းပါရန် မတ္တာရပ်လိုက်မှ. . .
ခင်ဗျာ့စာတွေကိုကျွန်တော်လည်းဖတ်တယ်၊တစ်အိမ်လုံးလည်းဖတ်တယ်၊သိပ်ကြိုက်တယ်၊ရှင်းရှင်းဝန်ခံမယ်ဗျာ၊-ကိုသာဓုကို ကျွန်တော်ကြည်ညိုတယ်၊-ကဲ-ကဲ-ဘယ်အထိလေးစားတယ်ဆိုတာထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြူရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အမှန်အတိုင်းဆိုကျွန်တော်ရှုံးတယ်၊ခင်ဗျားကအပြတ်အသတ်နိုင်တယ်'
ရဲဘော်ဝါတွေအဲဒီတုန်းကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းလေ၊ ကားမိဖူးမှာပေါ့၊မလက်တိုရွာဒုက္ခသည်တွေကိုပါကားကြီးကားငယ်နဲ့ တင်လာပြီးမဲမထည့်ရသေးတဲ့နာမည်တွေနဲ့အကုန်ကျုံးထည့်သွားတာပဲ'
မလုပ်နဲ့တော့-ကိုသာဓု၊-ခင်ဗျားကို-စေတနာ-ဆန္ဒမဲအားကိုးနဲ့သာလုပ်ရင်သူတို့ခေတ်မှာတစ်သက်လုံးမနိုင်ဘူး၊-အဲ-ခုနက စကားတောင်ကျန်နေသေးတယ်၊မလက်တိုဒုက္ခသည်တို့၊ရဲဘော်ဝါတို့ရဲ့မဲနဲ့တင်စိတ်မချရလို့ခင်ဗျားမဲပုံးကိုဖင်ကနေဝက်အူလှည့်နဲ့ ဖွင့်ခိုးပြီးကျွန်တော့်မဲပုံထဲထည့်ကြရသေးသတဲ့၊အဲဒါကိုများဗျာဧရာမစွန်စားခန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေကျနေတာပဲ၊ ကျွန်တော့်ဆီလာပြီးအားပါးတရပြောကြသေးတယ်၊ကျွန်တော်ဖြင့်ရှက်လွန်းလို့'
ဆုပေးပွဲပြီး၍အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ-သားလတ်-ဗလကြီး(သုမောင်)ကိုချော့သိပ်နေသောသူ့ကြီးတော်ဒေါ်သိန်းသိန်းက. . .
မှန်၏။သာဓုမှာစာပေဆုထက်အလေးအနက်ထား၍စဉ်းစားလာသည့်အကြောင်းရင်းကား. . .
၂။ဦးသိမ်းမောင်ကားဖဆ၏မြူလူကြီးလောင်းဖြစ်သည်။အရွေးလည်းခံရသည်။ထိပ်ဆုံးမြို့တော်ဝန်လည်းဖြစ်နေသည်။ သို့တိုင်အောင်လိမ်ညာညစ်ပတ်၍ရသောမဲနှင့်တက်ခဲ့ရသောကြောင့်သူရှက်နေသည်။ဖဆ၊ကလိမ်ကျမှုများဖွင့်ထုတ်ပြသည်။ နောင်သောအခါဤလိုအရှုပ်များတွင်သူပါဝင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောသည်။
(သာဓု လူဝါးဝတယ် စာအုပ်မှ)
ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေး..ဌေးကြွယ်...မင်း ငါ့ဆီ ပြန်လာခဲ့ပါ....။
၁၇- ၁၀- ၂၀၁၀
Posted by Andaman Hero at 8:48 PM0comments
လမ်းပြကြယ်ပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုကိုရအောင်တည်ဆောက်နေသည်။ယုံကြည်မှုလည်းရခဲ့ပြီ။လမ်းပြကြယ်အိမ်သို့ ၅၈သန်းသောပြည်သူလူထုထဲမှအချို့နေ့စဉ်နေအ်ိမ်သို့လာပြီးသူတို့အခက်အခဲကိုတင်ပြပြီးအကူညီတောင်းကြသည်။ တတ်နိုင်သမျှလာကူညီပေးခဲ့သည်။နေ့စဉ်နှင့်အမျှ၂၅ယောက်နှင့်၃၀ယောက်ပျမ်းမျှနေ့စဉ်နေအ်ိမ်သို့လာနေကြသည်။
ဥပမာ-လက်တွေ့ထောက်ပြမယ်။၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကငွေနှင့်စည်းရုံး၊အာဏာဖြင့်စည်းရုံးတယ်။ မက်လုံးပေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ပါတီတွေသာပြည်သူလူထုကြားထဲကိုအမှန်တကယ်ဆင်းပြီးလေ့လာရင်သိလိမ့်မည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကပေးတာယူနေကြတယ်။မဲပေးရန်ဆုံဖြတ်တဲ့ပြည်သူ့ဦးနှောက်သူ့ကိုမပေးဖို့နှလုံးသားထဲမှာဝှက်သိမ်း
သူတို့ကဘာမျှပြန်မပြောပဲသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြတယ်တွေ့လား…နောက်ဆုံးအနေနှင့်လမ်းပြကြယ်ပြောလိုက်မည်။ ဦးလှမောင်ရွှေကိုလည်းမသိ-မမြင်ဘူးပါ။ဒါပေမယ့်အင်ဒီအက်(NDF)နှင့်ယူဒီပီ(UDP)ပါတီတို့မဲအောင်နိုင်ရေးလုပ်နေတဲ့ လမ်းပြကြယ်ကဦးလှမောင်ရွှေထံသွားအလှူခံမည်။ပေးမလားယူမယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့်သားအဖတော်ပြီးလည်ပင်း ဖက်ထားပါစေ။သူတို့ကိုပြန်ရိုက်ဖို့ဒုတ်လိုနေတယ်လေ။ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့်တစညကိုနိုင်ဖို့ငွေဖြစ်တဲ့ဒုတ်လိုနေတယ်။ရိုက်ခွဲဖို့လေ လမ်းပြကြယ်ကိုပြောမလား-စိန်ခေါ်မလား-လူပါးဝလိုက်ပြီဟေ့--။
Posted by Andaman Hero at 3:32 PM0comments
သူ့မှာနှလုံးရောဂါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဆက်လက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းခံနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့အဖေဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂၂၀၀ကျော်ထဲကမှတဦးသာဖြစ်ပါတယ်။များစွာသောအကျဉ်းသားတွေဟာနှိပ် စက်ညှင်းပမ်းခြင်းကိုခံနေရပါတယ်။သူတို့ဟာဆိုရွားလှတဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိနေကြပြီးသမရိုးကျဆေးဝါးကုသခွင့်ကိုလည်း မရကြပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာနှစ်ဆနီးပါးတိုးလာပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာဒီမိုကရေစီပြန်လည် တည်ဆောက်နေပါတယ်လို့ကမ္ဘာကိုပြောနေပါတယ်။နိုဝင်ဘာမှာသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲက မြန်မာပြည်ကိုစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးမည့်ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာစစ်အာရှင်စနစ်ဆက်လက်အာဏာချုပ်ကိုင်ထားဖို့အတွက်ပုံဖေါ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်ပါတယ်။စစ်သားတချို့စစ်ယူနီဖေါင်းကနေအရပ်ဝတ်လဲ လိုက်တဲ့အပြောင်းအလဲသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဟာဘာမှမကွာခြားသွားတဲ့အာဏာရှင်တမျိုးတည်းကိုအရပ်ဝတ်နဲ့ပုံစံပြောင်းပြီး ထပ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကဆက်လက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်မပြောပြချင်တာကကျွန်မတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဆက် လက်ပြီးအကျဉ်းကျနေပါတယ်။သူမရဲ့ပါတီဟာဖျက်သိမ်းခြင်းခံထားရပါတယ်။စစ်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဘယ်သူပဲဘာပဲပြောပြော အကျဉ်းချခြင်းခံရပါတယ်။ဟာသလုပ်တာတောင်၊ကဗျာလေးစပ်တာတောင်အကျဉ်းကျခံကြရတယ်။မီဒီယာဆင်ဆာကလည်း များသထက်များလာနေပါတယ်။မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းကတိုင်းရင်းသားလူအနည်းစုဧရိယာတွေမှာအရပ်သားတွေကိုဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးခံရတာ၊ရွာတွေမီးရှို့ခံရတာနဲ့ကလေးတွေ၊ကလေး ငယ်ငယ်လေးတွေပါမကျန် ပစ်သတ်ခံရတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကိုBurma Campaign UKကလက်ခံရရှိထားတဲ့အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၁၅တာကာလအတွင်းကျေးရွာပေါင်း၃၅၀၀ကိုဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေဟာစစ်အာဏာ ရှင်တွေကကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက်ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်တဲ့လုပ်ရပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေဟာအာဏာကိုသူ့အလိုလိုဘယ်တော့မှ စွန့်လွှတ်မှာမဟုတ်တဲ့လူမဆန်စွာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှတဲ့လူသတ်သမားတွေရဲ့လုပ်ရပ်သာဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ဖိအားမျိုးကိုပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကဗိုလ်ချုပ်တွေဟာဖိအားဆိုတာကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူး။နိုင်ငံတကာ ဖိအားဆိုတာတကယ်ပဲမရှိမဖြစ်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အသုံးပြုလို့ရသမျှဖိအားမှန်သမျှကိုကျွန်မတို့အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်လာအောင်ဖိအားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုကိုဒီလိုစေ့စပ် ရေးအတွက်ဖိအားပေးဖို့UNဦးဆောင်တဲ့စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ရေးအောက်မှာကျွန်မတို့ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။UN ကော်မရှင်ကသွားပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့လူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ကမ္ဘာ့ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါ
Ko Kyaw Min Htike forward email မှတဆင့်ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
Posted by Andaman Hero at 3:30 PM0comments
၃၀-၉-၂၀၁၀ ( ည )
Posted by Andaman Hero at 4:12 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဇူလိုင် ၂၂ ရက် ၂၀၁၀ )
* ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်နှင့်ချင်းမိုင် FC ကန်မည် [Click]
* ရန်ကုန်သားများကြွက်ကြောက်၍မြွေမွေးကြ [Click]
Posted by Andaman Hero at 9:27 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဇူလိုင်လ ၅ ရက် ၂၀၁၀ )
* နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲမြန်မာအမျိုးသမီး ၃ ဦးပြိုင်မည် [Click]
* ဆမ်းဘားကချေသည်တွေငိုင်ခဲ့ရတဲ့ပွဲသိမ်းခရာသံ [Click]
* နည်းပြကြောင့်ဘရာဇီးရှုံးတာလား [Click]
* အာဂျင်တီးနားရှုံးနိမ့်၊မာရာဒိုနာနုတ်ထွက်နိုင် [Click]
* အရူးထင်ရပေမယ့်ထူးတဲ့မှော်ဆရာမာရာဒိုနာ [Click]
* ဂျာမနီကမ္ဘာ့ဖလားကိုင်မြှောက်နိုင်တော့မည်လော [Click]
Posted by Andaman Hero at 12:01 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဇွန်လ ၃၀ ရက် ၂၀၁၀ )
* အာဖဂန်မှာစစ်ရေးဆိုးနေဦးမယ် [Click]
* Caviar ငါးဥထုတ်တဲ့၊ငါးမျိုးမြန်မာပြည်မှာစမွေး [Click]
Posted by Andaman Hero at 10:22 AM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဇွန်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၀ )
* ရုရှားသူလျှိုဆယ်ယောက်အမရေိကန်မှာဖမ်းမိ [Click]
* ပါရာဂွေးနဲ့စပိန်ကွာတားတက်ပြီ [Click]
* ရွေးကောက်ပွဲနီးချိန်မြန်မာပြည်တွင်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပိုတင်းကျပ် [Click]
* သူလျှိုဖမ်းဆီးမှုကြောင့်အမေရိကန်၊ရုရှားဆက်ဆံရေးမထိခိုက်နိုင် [Click]
* NLD ရဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင်ရပ်တည်ချက်သြစတြေးလျမေးမြန်း [Click]
* တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုး [Click]
* ဒိုက်ဦးနယ်ဘက်မှာကြွက်တွေနေရာရွှေ့ [Click]
Posted by Andaman Hero at 8:02 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဇွန်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၀ )
* ဘဏ္ဌာရေးလိုငွေတဝက်လျှော့ချဖို့ G20 သဘောတူ [Click]
* နာဂစ်ဒဏ်သင့်လူထုအတွက်စီမံကိန်း ၃ ခုလွှဲပြောင်းပေး [Click]
* နယ်သာလန်အသင်းစလိုဗက်ကီးယားကိုအနိုင်ကန်ပြီးကွာတားတက်သွားပြီ [Click]
* နျူကလီးယားစွမ်းရည်မြှင့်တင်မယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားခြိမ်းခြောက် [Click]
* တအိမ်လျှင်အစိုးရလက်ဝေခံအသင်းဝင်တဦးနှုန်းထည့်ခိုင်း [Click]
* ဦးဆခုံတိန့်ယိန်းကိုပါတီထောင်ရန်ချဉ်းကပ် [Click]
* ဒုံးတပ်ရင်းအသစ်များဖွင့်လှစ် [Click]
* အတိမ်းအစောင်းမခံသူ(သို့မဟုတ်)ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှ [Click]
ယနေ့ သတင်းများ ( ဇွန်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၀ )
* အင်းလေးကန်၊ရေခန်းမှုသတင်း၊တားမြစ် [Click]
* ရှပ်နီဆန္ဒပြပွဲတွင်ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများစွာပါဝင် [Click]
* မူးယစ်ဆေးအများစု၊အရှေ့မြောက်ဒေသေမှာထွက် [Click]
* ရှေ့နေနဲ့ တခြားစကားမပြောရဘူးဆိုတာ၊ဒေါ်စုကန့်ကွက် [Click]
* တပ်မတော်ခန်းမက၊ကားပြပွဲ [Click]
* လူထုစိန်ဝင်းကနိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများရေးသားခြင်းယာယီရပ်တန့်၊ [Click]
* ၅ သိန်းတန်ဖုန်းဝယ်သူနည်းသဖြင့် ၂ ရက်အတွင်းအပြီးအစီးလုပ်ပေးနေ [Click]
* ရွေးကောက်ပွဲရက်က ၂ဝ၁ဝ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့လား [Click]
Posted by Andaman Hero at 3:33 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မေလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၀ )
Posted by Andaman Hero at 5:14 PM0comments
ယေ​န့ ​သ​တ​င်းများ (ေ​မ​လ ၁​၀ ရ​က် ၂​၀​၁​၀ )
( ၂​၀​၁​၀ေ​ရွးေ​ကာက်ပွဲ​ကို​ရည်ညွ​န်း​သ​ည်။)
ရှ​ည် တု​တ် တို
Posted by Andaman Hero at 4:53 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၀ )
တို့ ရွာကလို မဲဆောက်အလှူ
ဒို့ ရွာက ရှင်ပြု လေးမျက်နှာအော်လန်တပ်လို့ 
၀က်သားနီနဲ့ ကြက်ဆီပြန်ကို ရွာတိုင်းကလာ
မီးခိုးတိတ် ကြိတ်ပြန်ကြတယ် ..
ဟိုး .. အတိတ်က ဒို့ ဆီမှာဒီလိုရှိတယ်ကွ
တူတော်မောင် ချက်စူက ဟုတ်ရဲ့လား ဘဘ တဲ့ ..
ဟဲ့ .. ခွေးမသား .. မင်းကိုငါညာရမလားဟဲ့ ..
ချက်စူကပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့ ဘဘရယ် ခုဟာက နအဖ ခေတ်
သင်္ကြန်မတိုင်ခင်က လမ်းထိပ်က ရှင်ပြုအလှူမှာ
အင်း .. မြန်မာပြည်နဲ့ ကင်းကွာအနှစ် နှစ်ဆယ်ကြာမှာ
ဒို့ လူမျိုးတွေစာရိတ္တ မှန်းမရအောင်ပြောင်းသွားလေရဲ့ ..
ခုတော့ .. ကိုမင်းဇော် ကြည်ကြည်ခင်နဲ့ ဆရာဂါတို့ ရှင်ပြုပွဲ
အဲလေ ..သူတို့ သားတွေရဲ့ရှင်ပြုပွဲ အော်လန်နဲ့ ဆော်
လေးမျက်နှာကြား အော် ထားလေသမို့..
ဆန်တာကလော့ ကိုမိုးကြိုးတို့ ရွာလုံးကျွတ်
မီးခိုးတိတ်ပွဲကို အေကေအို တော်ပျော်တို့ 
မုဒိတာပွားလိုက်မယ် .. ဟဲ ..ဟဲ..ဟဲ..
အောင်မယ် တို့လူတွေခြောက်လနဲ့ပြီးမယ်ထင်လို့လိုက်ခဲ့ပေါ့၊နှစ် နှစ်ဆယ်ကြာ
မိုးမွှန်အောင်ပြော အမေရိကန် အင်္ဂလန် ကနေဒါမကျန်
ဥရောပတလျှောက် အလှူကောက်လို့ 
လျှောစောင်ကိုခြုံ အိုက်တင်တဖုံနဲ့စမနာများ လျှောက်ကာပွားကြ
ဒီလို မျိုးချစ် သောက်ကျင့်အသစ်နဲ့ လူမျိူးအစုံ၊တို့လူ့ဘုံကို သူတို့ဘယ်မှာခေါင်းဆောင်နိုင်အံ့။
Posted by Andaman Hero at 11:57 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၀ )
* ထိုင်းနိုင်ငံရေအကျပ်အတည်းသုံးသပ်ချက် [Click]
* သမ္မတကာချင်စကီရဲ့ရုပ်အလောင်းပိုလန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိ [Click]
Posted by Andaman Hero at 8:04 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၀ )
အော် -- ပိတောက်နှမငယ်
သူ့ ဘိုး၊ဘွားအမွေ၊ဘထွေးလုသမို့ 
* ပိုလန်သမ္မတ ရုသျှမှာလေယာဉ်ပျက်ကျသေဆုံး [Click]
* ကာဂစ္စတန်သမ္မတ အသက်အန္တရာယ် အတွက်စိုးရိမ် [Click]
* ထိုင်းဆန္ဒပြပွဲနှိမ်နှင်းမှု ၁၅ ယောက်သေဆုံး [Click]
* ပိုလန်သမ္မတ လေယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံး [Click]
* ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအပေါ်အဲန်အယ်လ်ဒီတရားစွဲဆိုချက်ဗဟိုတရားရုံးလက်မခံ [Click]
* ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အာဆီယံတောင်းဆို [Click]
* မြန်မာ့အရေးအမေရိကန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမည် [Click]
* ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာရပ်တည်ချက်နော်ဝေနဲ့ထိုင်းသံတမန်တွေအဲန်အယ်လ်ဒီနဲ့ဆွေးနွေး [Click]
* ရွေးကောက်ပွဲရက်စစ်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမပြောနိုင် [Click]
Posted by Andaman Hero at 5:44 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၁၇ ရက် ၂၀၁၀ )
* ဘာသာရရေးကိုနိုင်ငံရေးမှာအလွဲမသုံးရအပေါ်သုံးသပ်ချက် [Click]
* မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေသစ်ကုလမှာအရေးပေါ်ဆွေးနွေးဖို့ဗြိတိန်တိုက်တွန်း [Click]
* ထိုင်းဆန္ဒပြသမားတွေအစိုးရရုံးကိုသွေးနဲ့ပက် [Click]
* မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှုအပြောသက်သက်မဖြစ်ဖို့ NLD မျှော်လင့် [Click]
* နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ၀င်ပြိုင်ချင်သူတွေအတွက်လည်းမပြည့်စုံသေး [Click]
* ရှားပါးတိရစ္ဆာန်မှောင်ခိုရောင်းချမှုများပြားလာ [Click]
* မန္တလေးမြို့ 78 ကုန်တိုက်တွင်အသေးစားမီးလောင်မှုဖြစ်ပွား [Click]
* ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလိုင်းဦးပိုင်သို့လွှဲပြောင်း [Click]
Posted by Andaman Hero at 6:33 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၃ ရက် ၂၀၁၀ )
* သံဃာကိုနောက်ပြောင်သည့်သီချင်းကြောင့်ဒါရိုက်တာတောင်းပန်ရ [Click]
* ဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့သားအစ္စရေးသူလျှိုလုပ်ခဲ့ [Click]
Posted by Andaman Hero at 3:52 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂ ရက် ၂၀၁၀ )
* နူးကလီးယားလက်နက်တွေအမေရိကန်လျှော့မယ် [Click]
* မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုမြန်မာလိုက်နာမှုမရှိ [Click]
* ဒေါ်စုအမှုပယ်ချတာကြောင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုထိခိုက်နိုင် [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အယူခံပယ်ချခံရမှုဥရောပသမဂ္ဂကြေညာချက်ထုတ် [Click]
* ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များမီးအန္တရာယ်စိုးရိမ်နေကြ [Click]
* ရန်ကုန်တွင်တက္ကစီမီတာစနစ်စနစ်တကျမဖြစ် [Click]
* တောင်သူကြီးများကိုယ်တိုင်တောင်သူလယ်သမားနေ့ကျင်းပ [Click]
* မြစ်ဆုံရေကာတာတည်ဆောက်ရေးရပ်တန့်ရန်တရုတ်အစိုးရထံကချင်အန်ဂျီအိုတောင်းဆို [Click]
* မဲဆောက်ဒေသမှမြန်မာအလုပ်သမားများနိုင်ငံသားစိစစ်မှုခံယူရန်စိတ်မ၀င်စား [Click]
* နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ရေး “၀” အချိန်တိုးတောင်း [Click]
* စားစရာဆန်ဖူလုံဟုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပြောဆို [Click]
* လယ်သမားနေ့တွင်လယ်သမားအခွင့်အရေးများတောင်းဆို [Click]
* ကင်မရွန်းနိုင်ငံသားနှစ်ဦးရန်ကုန်တွင်လိမ်လည်မှုဖြင့်အဖမ်းခံရ [Click]
* သိမ်ကြီးဈေးစားသောက်ဆိုင်တဆိုင်တွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား [Click]
* ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ရန်ကုန်တွင်စည်ကားစွာကျင်းပမည် [Click]
* ငလျင်အတွက်ချီလီကအကူအညီတောင်းပြီ [Click]
* ဈေးကွက်ထဲကိုမြန်မာ့ဆန်ထိုးဖေါက်နိုင်မလား [Click]
Posted by Andaman Hero at 6:50 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၁၀ )
* ငလျင်ဘေးသင့်ဒေသကူညီရေးစစ်သား ၁၀,၀၀၀ စေလွှတ် [Click]
* မြန်မာနိုင်ငံရောက်ကင်မရွန်းဘောလုံးသမား ၂ ဦးငွေစက္ကူအတုလုပ်ရန်ကြံစည်မှုနဲ့တရားစွဲ
* NLD ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ နဲ့အရန် ၈ ဦးစာရင်းမကြာမီထုတ်ပြန်မည် [Click]
* ငလျင်ဘေးနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးဖို့ချီလီသမ္မတပန်ကြား [Click]
* ချီလီငလျင်ဘေးအသက်မသေပိတ်မိနေသူများရှာဖွေ [Click]
* ပစိဖိတ်ကမ်းနိုင်ငံအားလုံးဆူနာမီသတိပေးချက်ရုပ်သိမ်း [Click]
* ထိုင်းဘဏ် ၂ ခုလက်ပစ်ဗုံးပစ်ခံရလို့ဘန်ကောက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ် [Click]
* ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကိစ္စမြန်မာပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဘန်ကောက်မြို့မှာရှင်းပြ [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အယူခံပြင်ဆင်ချက်ပယ်ချမှုနိုင်ငံတကာပြစ်တင်ဝေဖန် [Click]
* မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ AH1N1 အခြေအနေ [Click]
* နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီတွေသြစတြေးလျဆက်ပေးတော့မည်မဟုတ် [Click]
* နအဖငြင်းပယ်ထားသည့်တောင်းဆိုချက်များထပ်မံတင်ပြ၍ဝတပ်ဖွဲ့တုံ့ပြန် [Click]
* အဓမ္မခိုင်းစေခံရသည့်ရွာသား(၄၀၀)ကျော်တို့ကအိုင်အယ်လ်အိုသို့တိုင်တန်း [Click]
* ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်တွင်လောင်းကစားရုံဖွင့် [Click]
* ကလေးငယ်များကိုလိမ်လည်ဖြားယောင်းပြီးစစ်သားစုဆောင်း [Click]
* ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစာအုပ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဆုချီးမြှင့် [Click]
* အလှမ်းဝေးနေသောဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေး [Click]
* ထိုင်း-မြန်မာကုန်သွယ်ရေးဇုံအသစ်ဖွင့်လှစ်မည် [Click]
* သိမ်ကြီးဈေး D ရုံမီးလောင် [Click]
* ဦးပိုင်ကတိဖျက်အပြီးဆားဈေးထိုးကျ [Click]
* ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက်တလသက်တမ်းတိုး [Click]
* ထပ်ဆင်ရဲ့ဓနငွေကြေးဘာကြောင့်အသိမ်းခံရသလဲ [Click]
Posted by Andaman Hero at 10:55 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၀ )
* ဦးတင်ဦးနဲ့သီးသန့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် [Click]
* ချုပ်ကိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး၊သိပ်ခံရတဲ့အတွက်ချိန်ချိန်ဆဆလုပ်ရတဲ့သဘောတွေပါဗျာ [Click]
* နီဂျာစစ်အာဏာသိမ်းမှုအတိုက်အခံတွေထောက်ခံ [Click]
* NLD နဲ့ကင်တားနားဆွေးနွေးချက်အပြည့်အစုံ [Click]
* အိန္ဒိယသူပုန်အတွက်တရုတ်လက်နက်များမြန်မာပြည်မှတဆင့်ဝင်ရောက် [Click]
* ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးအမျိုးအစားပေါင်းစုံဉာဏ်မီသလောက် [Click]
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၀ )
* ဂီနီသတ်ဖြတ်မှုရာဇဝတ်မှုမြောက် [Click]
* စစ်အာဏာသိမ်းနီဂျာနိုင်ငံအာဖရိကသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှရပ်ဆိုင်း [Click]
* လယ်သိမ်းခံရလို့ ILO တိုင်တဲ့လယ်သမား(၁၁)ဦးပြန်လွတ် [Click]
* မြန်မာပြည်မှာဝက်တုပ်ကွေးကူးစက်ခံရသူဒီ ၂ လအတွင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ [Click]
* မိုးဟေကိုရန်ကုန်တွင်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီ [Click]
* ချစ်သူများနေ့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ရင်းနှီးလာကြပြီ [Click]
Posted by Andaman Hero at 11:34 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၀ )
* ကင်တားနား၊ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခွင့်မရ [Click]
* ရွှေပြည်သာအထည်စက်ရုံဝက်တုပ်ကွေးတွေ့ရှိ [Click]
* သမ္မတအိုဘားမားဒလိုင်းလားမားနဲ့တွေ့ဆုံမှုတရုတ်ကန့်ကွက် [Click]
* ဘိလပ်မြေဈေးထောင်တက်နေ၍ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအခက်တွေ့ [Click]
* မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်ဘန်ကောက်တွင်ဆေးကုသမှုခံယူ [Click]
* လူကြိုက်နည်းစက်မှု(၁)စက်ဘီးကိုပြိုင်ပွဲဖြင့်အရောင်းမြှင့် [Click]
* ကိုးကန့်ဒေသဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖုန်ကျားရှင်ကိုနအဖစွပ်စွဲ [Click]
* မစ္စတာကင်တားနားဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခွင့်မရ၍စိတ်ပျက်ကြောင်းပြော [Click]
* ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်အခြေအနေမရှိကြောင်းကင်တားနားဝေဖန် [Click]
* ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်အလုပ်သမားများဆန္ဒပြ [Click]
* နျူကလီးယားလက်နက်မြောက်ကိုရီးယားစွန့်လွှတ်မည်မဟုတ် [Click]
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၀ )
* အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတောင်းဆို [Click]
* ကင်တားနားဘူးသီးတောင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ [Click]
* KNU နဲ့ အစိုးရတိုက်ပွဲတွေရပ်ဆိုင်းဖို့ဘန်ကီမွန်းတောင်းဆို [Click]
* လေဘေးကယ်ဆယ်သူဦးဃောသိတ၊ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ကျ [Click]
* အန်အယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကင်တားနားတွေ့ [Click]
* ဟားမတ်ခေါင်းဆောင်သတ်မှုရှင်းဖို့ အစ္စရေးကိုဗြိတိန်ပြော [Click]
* ကင်တားနားဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခွင့်မရ [Click]
* ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက်ရိုဟင်ဂျာများဖိနှိပ်ခံရ [Click]
* မီးလောင်နေရာအထပ်မြင့်ဈေးဆောက်မည် [Click]
* အောင်လံမှလယ်သမားများပြစ်ဒဏ်လျှော့လွှတ်မိန့်ကျ [Click]
Posted by Andaman Hero at 8:07 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၀ )
* ဦးတင်ဦးအကျယ်ချုပ်ကလွတ်ပြီ [Click]
* ဦးတင်ဦးလွတ်မြောက်မှုကုလသမဂ္ဂကြိုဆို [Click]
* အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက် [Click]
* သြစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့တွင်ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ [Click]
Posted by Andaman Hero at 4:10 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက် ၂၀၀၉ )
* ဦးတင်ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက် [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မည်ဟုဦးတင်ဦးမျှော်လင့် [Click]
* အမေရိကန်မူဝါဒကိုထောက်ခံကြောင်းဦးတင်ဦးပြော [Click]
* NLD ဒုဥက္ကဌဦးတင်ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက် [Click]
* ပြန်လွတ်လာသည့်ဦးတင်ဦးသတင်းသမားများကိုယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံဖြင့်တွေ့ဆုံ [Click]
* ၇ နှစ်ကြာချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရသည့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းဦးတင်ဦးပြန်လွတ်ပြီ [Click]
* BBC မြန်မာပိုင်းက၀က်ဆိုက်အတွက် Myanmar3သုံးပြီ [Click]
* တာလီဘန်သူပုန်တွေကိုအဓိကစစ်ဆင်ရေးစတင် [Click]
* အသတ်ခံရသည့်ကရင် ၈ဦးကိုမီးသဂြိုင်္လ်ပြီးစီး [Click]
* ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မွေးမြူရေးခြံကြက်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွား [Click]
* မြန်မာ-ဘင်္ဂလားနယ်စပ်ဆင်ဖြူရှာပုံတော်ရွာသားများဒုက္ခရောက် [Click]
* နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရဲ့သုခအလင်းစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ [Click]
* ၆၃ နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အင်န်အယ်ဒီပါတီကအထိမ်းအမှတ်ပွဲများဆင်နွှဲ [Click]
* ကိုရီးယားတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် ၆၃ နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမြင်ကွင်း [Click]
* သင်္ဃန်းကျွန်းဈေးမီးလောင်မှုကျပ်သိန်းထောင်ချီဆုံးရှုံး [Click]
* ညီညီအောင်ကိုပြည်ထောင်သို့ပြောင်းရွှေ့ [Click]
* Miss Tourism 2010 ကျင်းပ [Click]
* ITUC ကလှိုင်သာယာဆန္ဒပြပွဲကိုထောက်ခံ [Click]
Posted by Andaman Hero at 8:43 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက် ၂၀၀၉ )
* ဂရိဘဏ္ဍာရေးပြဿနာအီးယူကူညီမယ် [Click]
* လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ဖို့မျှော်လင့် [Click]
* အီရန်တော်လှန်ရေးနေ့အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွား [Click]
* လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ခရီးစဉ်အတွက်စစ်အစိုးရပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ် [Click]
* ကေအိုင်အိုနယ်မြေအနီးနအဖစစ်ကြောင်းများဝင်ရောက် [Click]
* တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်(၁၅)ခုရှိဟုနအဖစစ်အစိုးရဖော်ပြ [Click]
* နာရေးဆိုင်ရာအယူသီးမှုများဖြေရှင်းပေးရန်ပန်ကြား [Click]
* ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးတင်ဦးကိုလွှတ်မတဲ့လား [Click]
* နေပြည်တော်ဆေးရုံတွင် A (H1N1)တုပ်ကွေးလူနာများရှိဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်း
* လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(၄)ကျူးကျော်နေအိမ်များရယကသို့လစဉ်ကြေး(၅,၀၀၀)ကျပ်ပေးဆောင်နေရ [Click]
* ၆၃ နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ [Click]
* အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပြည်ထောင်စုနေ့မှာအန်အဲယ်လ်ဒီတိုက်တွန်း [Click]
* သမ္မတအိုဘားမားတိဘက်ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့တွေ့မယ့်အစီအစဉ်တရုတ်အစိုးရကန့်ကွက် [Click]
* အဲန်အယ်လ်ဒီဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးပြန်လွတ်လာဖို့ပါတီမျှော်လင့် [Click]
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၀ )
* ကရင်‌ဒုက္ခသည်‌ပြန်‌မပို့ ‌ရေးကြားနာမှု [Click]
* အီရန်အတိုက်အခံနဲ့အစိုးရလိုလားသူတွေထိပ်တိုက်ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိ [Click]
* အာဖဂန်မှာနှင်းတောင်ပြိုကျပြီးလူ ၁၆၀ ကျော်သေဆုံး [Click]
* “မောင့်လပြည့်ဝန်း”ကိုမူရင်းပိုင်ရှင်ကသီဆိုထုတ်ဝေရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီ [Click]
* ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၃)ဒေသမှကျေးရွာများကိုနအဖတပ်များမီးရှို့ဖျက်ဆီး [Click]
* ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းပြဒါးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေး [Click]
* နာဂစ်ဒုက္ခသည်များအကျပ်အတည်းကြားမှရုန်းကန်နေကြရဆဲ [Click]
* တရားမဝင်ဆန်တင်ပို့မှုကိုစစ်တပ်ကငွေကောက် [Click]
* ယနေ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့၏သမိုင်းရေးတာဝန် [Click]
* ပျော်ဘွယ်ကြီးတွင်တောင်သူများအားစစ်သင်တန်းပေး [Click]
* ပန်းခြံကိုရောင်းစား၍ပြည်သူများဒေါသထွက် [Click]
* ဂူဂဲလ်ကအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွင်နယ်ချဲ့ [Click]
* ကချင်မြစ်ဆုံဒေသရွှေတူးခွင့်ပိတ်ပင် [Click]
* အကျိုးပြုဂီတပွဲတော်နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပမည် [Click]
* အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအတွက်သမဂ္ဂများလိုအပ်နေ [Click]
* စစ်သားများဝိုင်းရိုက်၍စားပွဲထိုး ၂ ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန် [Click]
* ရသေ့တောင်ရွာမီး၊လူ ၁၅၀ ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ် [Click]
* NLD CEC အဖွဲ့ဝင်သစ်(၉)ဦး၏ကိုယ်ရေးအထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း [Click]
* ကင်တားနားမြန်မာနိုင်ငံသွားမည်။ [Click]
* အီရန်အတိုက်အခံတွေရဲ့ရှေ့အလားအလာ [Click]
* လှိုင်သာယာအလုပ်သမားများဆက်လက်ဆန္ဒပြ [Click]
* ကိုညီညီအောင်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေတောင်းဆို [Click]
Posted by Andaman Hero at 11:22 AM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၀ ရက် ၂၀၁၀ )
* နိုင်‌ဂျီးရီးယားဒုသမ္မတ‌ခေါင်း‌ဆောငြ်‌ဖစ်‌လာ [Click]
* သီရိလင်္ကာသမ္မတလွှတ်တော်ဖျက်သိမ်း [Click]
* အန်အယ်လ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်မ၀င်ဆုံးဖြတ်ရန်အချိန်မရောက်သေးဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား [Click]
* နအဖကမ်းလှမ်းမှုကိုဝခေါင်းဆောင်ထပ်မံပယ်ချ [Click]
* ကိုညီညီအောင်အားထောင်(၃)နှစ်ချမှတ် [Click]
* မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်ပြုံယန်းကစိစစ်နေ [Click]
* ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝိုင်းရိုက်၍ဒေသခံရွာသားတဦးသေဆုံး [Click]
* ပြည်ထောင်စုနေ့နဲ့ပင်လုံစိတ်ဓာတ် [Click]
* ဂရိအစိုးရဝန်‌ထမ်းအလုပ်‌သမား‌တွေတနိုင်‌ငံလုံးဆန္ဒပြ [Click]
* အသက် ၁၇ နှစ်နဲ့စစ်သင်တန်းတက်နေရ [Click]
* ဇီးကုန်း NLD အဖွဲ့ ဝင်ဦးအေးကိုထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်အပြစ်ပေးခံရ [Click]
* ဒေါက်တာတူးဂျာဦးဆောင်သည့်ကချင်ပါတီရွေးကောက်ပွဲဝင်မည် [Click]
* အမျိုးသားစာဆို၊စာရေးဆရာကြီးဦးသော်ဇင်နှစ် ၁၀၀ ပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲပြုလုပ် [Click]
* အမေရိကန်ကမြန်မာတို့အားမနာတန်းပြောနိုင်မည့်တယ်လီဖုံး-မက်ထရို [Click]
* အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်သော်လည်းထိုင်းကအခွန်ဆက်ကောက် [Click]
* မြစ်ဆုံကြောင့်ရွာများပြောင်းရွှေ့ရန်ပြင်ဆင်နေ [Click]
* ဆန္ဒပြမှုကူးစက်မည်ကိုစိုးရိမ်၍လှိုင်သာယာစက်ရုံအချို့ပိတ် [Click]
* ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို [Click]
* လစာတိုးသဖြင့်အလုပ်သမားများသပိတ်လှန် [Click]
* ၀က်တုပ်ကွေးကူးစက်ခံရသူများထပ်မံတွေ့ရှိ [Click]
* ရုပ်ရှင်ရုံတွေလည်းပုဂ္ဂလိကထံရောင်းချ [Click]
* နိုင်ငံရေးအထိမ်းအမှတ်နေ့များထက်ချစ်သူများနေ့ကပိုရေပန်းစား [Click]
* ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ရေးသက်တမ်းတိုးပေးရန်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံတောင်းဆိုမည် [Click]
* သီချင်းတရားမ၀င်သုံးစွဲသောထီဆိုင်လျော်ကြေးပေးရ [Click]
* ချိုကုပ်ဒူးကြီးကိုစိတ္တဇဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ရခြင်း [Click]
Posted by Andaman Hero at 3:10 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၉ ရက် ၂၀၁၀ )
* ဂျက်‌ဆင်‌ဆရာဝန်‌ကိုတရားစွဲပြီ [Click]
* အီရန်ကိုကုလအရေးယူဒဏ်ခတ်မှုအသစ်အမေရိကန်တိုက်တွန်း [Click]
* ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်သူသီရိလင်္ကာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဖမ်းဆီးခံရ [Click]
* UWSP ဥက္ကဋ္ဌကစရဖအကြီးအကဲနှင့်တွေ့ရန်ထပ်မံငြင်းဆို [Click]
* လှိုင်သာယာအလုပ်သမားများဆက်လက်ဆန္ဒပြ၊လုံခြုံရေးတင်းကျပ် [Click]
* မင်းပြားမီး၊နေအိမ် ၃၅ လုံးလောင်ကျွမ်း [Click]
* ဆိပ်‌ကမ်း‌တွေပုဂ္ဂလိကပေး‌တော့မယ်‌ [Click]
* လှိုင်သာယာအလုပ်သမားထိုင်သပိတ်လုံခြုံရေးတပ်ဝိုင်းထား [Click]
* ဒေါ်စုလွှတ်ပေးဖို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတောင်းဆို [Click]
* နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့်ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေးလိုအပ်နေဆဲ [Click]
* အင်တာနက်ဆိုင်လိုင်စင်ကြေးကွက်ကြားလျှော့ [Click]
* လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်လုပ်သားများတတိယအကြိမ်ဆန္ဒပြ [Click]
* ငါးထပ်ကြီးရပ်ကွက်မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရဟုရန်ကုန်တိုင်းမီးသတ်မှပြောကြား [Click]
* သီရိမင်္ဂလာဈေးပြောင်းရွှေ့မည့်သတင်းထွက်ပေါ် [Click]
Posted by Andaman Hero at 5:36 PM0comments